China Plane namono mpamokatra sy mpamatsy «veneer aluminium» Chenyu
Vato vita amin'ny alimina vita amin'ny aluminium
Famaritana ny vokatra momba ny karatra loko ...
Aluminium sokitra v ...
Aluminium mihantona ...
Vato fakana tahaka a ...
Haka-tahaka ala gr ...
Ampiasao ny elanelana eo anelanelan'ny taolan-tehezan'ilay veneer aliminioma hanamboarana azy amin'ny visy, ary avy eo hamehezana ny lakaoly hamenoana azy io no endrika fametrahana matetika ny veneer aluminium.
Ny veneer vita amin'ny aliminioma dia mamorona tsipika iray eo anelanelan'ny veneer aliminioma mba hanaovana Misy fomba mirindra bebe kokoa amin'ny dingam-panafody, ary ny lokon'ny lakaoly isan-karazany dia ampiasaina mba hamoronana tsipika misy tonony samy hafa, izay azo ampifanarahana sy ampifanoherana amin'ny velaran'ny aluminium, miankina amin'ny ny toe-tsain'ilay sehatra.
Ny endri-javatra lehibe
1. Mavesatra maivana, henjana tsara, tanjaka avo.
2. Faharetana maharitra sy fanoherana ny harafesina.
3. Asa-tanana mahay. .
4. Fanaronana fanamiana sy loko maro karazana ..
5. Tsy mora ny tasy, mora diovina sy tazomina.
6. Fametrahana sy fananganana mora sy haingana.
7. Azo ahodina sy ampiasaina indray, izay tsara ho fiarovana ny tontolo iainana.
Fitaovana sy fanamboarana
Ny firafiny dia miorina amin'ny takelaka, hamafitra ary fehezan-kaody Angular. Ny fehezan-dalàna zorony dia azo atondrika mivantana ary hohomboan'ny tontonana, ary azo aforitra amin'ny tontonana ihany koa.
Ny henjana dia mifamatotra amin'ny visy vy any ambadiky ny vatan'ny tabilao, mahatonga azy io ho mafy orina, manatsara be ny tanjaka sy ny hamafin'ny rindrin'ny ambain-drivotra veneer aluminium, ary miantoka ny fisaka amin'ny fampiasana maharitra sy fanoherana ny horohoron-tany.
Ny veneer vita amin'ny aliminioma dia mety amin'ny fanaingoana ny rindrina anatiny sy ivelany, ny faran'ny lavarangana, ny volony, ny haingon-trano, ny lalantsara avo, ny tetezana mpandeha an-tongotra, ny sisin'ny ascenseur, ny lavarangana, ny takelaka fanaovana dokam-barotra, ny valindrihana miorina anaty trano sns.
Teo aloha: Fametahana veneer aluminium
Manaraka: Vato vita amin'ny alimina tsy misy plastika
Andiana veneer vita amin'ny alimina
Fametahana veneer aluminium
Vato vita amin'ny alim-bary vita amin'ny hazo ala
Vato vita amin'ny alimina tsy misy plastika
Vato vita amin'ny alimina vita amin'ny vato
Vato vita amin'ny alim-pito
Soraty izahay: chenyujinchukou@163.com